Zaka tsara : fahamarinan-toerana sy toetra | NewsMada
Mety ho marin-toerana izay miovaova lava na tsy marin-toetra? Sarotra ny mitsara zavatra eo am-pihetsiketsehana. Aorian’ny orana no ahitana ny fiakatry ny rano. Hatramin’izao, mitady izay hoe fahamarinan-toerana sy fitoniana politika ny fitondrana?
Sarotra sy manahirana ny mitsara, raha tsy tafapetraka sy miasa avokoa ireo andrimpanjakana.
Mila mazava sy hentitra amin’izay ny politika, ny tanjona, ny fandaharanasa, ny fomba fiasa, ny olona hanao ny asa, ny hoenti-manana, ny laharam-pahamehana…
Mba ny asa vita no hahamarin-toerana. Tsy fanaovana izay danin’ny kibo ho tsy azo tsikeraina tsinona ny fahamarinan-toerana, fa fahazoana miasa amin’izay. Na soketaina ho manakorontana izay mitsikera sy mihetsika rehetra. Tsy fahamarinan-toetra izay.
Aleo hiaraha-mahita ny asa vita, fa tsikeraina izay miasa mba hahavita bebe kokoa. Fa tsy tenenin-dava vao mikoropaka, na tsy miraharaha izay tenenina aminy… Aiza ho aiza izany rehetra izany amin’izao?